Chiyangwa do right, call for fresh Zifa polls - Zimbabwe Today
Home / Politics / Opinion / Chiyangwa do right, call for fresh Zifa polls
April 3, 2018	Opinion
Constitutionally, Chiyangwa can no longer claim to be the Zifa president, as it is public knowledge that he was voted in to serve the remainder of his predecessor, Cuthbert Dube’s term.
The referral to Fifa to adjudicate whether Chiyangwa was serving out Dube’s term was unnecessary, a waste of time and an effort to delay the inevitable.
But the resignation of two board members and Premier Soccer League chairman, Keni Mubaiwa’s snubbing of a board post puts Chiyangwa in an unenviable position and he should do the right thing and step aside.
While Chiyangwa can boast of many successes during his short term, there have been some missteps along the way, particularly trying to change the football governing body’s name to National Football Association of Zimbabwe.
Chiyangwa did not cover himself in glory when Zifa got tangled in the Premier Soccer League relegation issue, which threatened sponsorship for the country’s top league.
But he can point out that Zimbabwe made a return to the Africa Cup of Nations finals during his tenure, the men’s national team won the Cosafa tournament, while the women’s national team made it to the Olympics.
Previous ED’s acid test that won’t go away
Next Doctors Return to Work